Xinhua Myanmar - ရုရှားနိုင်ငံ၌ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဆန္ဒပြပွဲများကို ထောက်ခံအားပေးခြင်းအတွက် အမေရိကန်သံရုံးအား ရုရှားပြစ်တင်ဝေဖန်
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့၌ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်က အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Alexei Navalny အား ထောက်ခံသူများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိပ်တိုက်တွေ့နေစဉ်(ဆင်ဟွာ) Europe
ရုရှားနိုင်ငံ၌ အတိုက်အခံများ၏ ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းအတွက် မော်စကိုမြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးအား ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပြီး ယင်းမှာ ရုရှားနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စရပ်များသာဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနကဆိုသည်။
ရုရှားနိုင်ငံမြို့ကြီးများတွင် ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ထောက်ခံအားပေးသည့် သတင်းစကားများ တက်ကြွစွာ ရေးသားခြင်းမှာ အမေရိကန်သံရုံးအနေဖြင့် သံတမန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လေးစားလိုက်နာမှုမရှိသည်ကို ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့၌ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်က အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Alexei Navalny အား ထောက်ခံသူများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိပ်တိုက်တွေ့နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
“ အဲဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ပါဝင်နေတဲ့ အဆိုးမြင်ဝါဒီ လူအုပ်စုရဲ့ အကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြမှုတွေကို အားပေးအားမြှောက် လုပ်နေတာ ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြခြင်းဆိုပြီး ကြောင်သူတော် အပြောမျိုးလုပ်နေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့က ပြောနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကြေညာချက်က ဆိုသည်။
အမေရိကန်သံတမန်များ၏ အစွန်းရောက်အပြုအမူအပေါ် အားပေးအားမြှောက်ပြုရန် ကြိုးပမ်းမှုများသည် အဆုံးသတ်တွင် ကျဆုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ရုရှား-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးအတွက် အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ရုရှားအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် Alexei Navalny ဖမ်းဆီးခံရခြင်းအား ကန့်ကွက်သည့် ရုရှားနိုင်ငံသားအချို့သည် ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက် နံနက်အစောပိုင်းက ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဆန္ဒပြပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အထက်ပါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မှတ်ချက်စကား ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မော်စကိုမြို့ ကရင်မလင်နန်းတော်အနီးရှိ Pushkin ရင်ပြင်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဆန္ဒပြပွဲတွင် လူပေါင်း ၄,၀၀၀ ကျော်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ရုရှားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ရဲတပ်ဖွဲ့က မော်စကိုမြို့လယ်ခေါင်တွင် ဆန္ဒပြသမား ၆၀၀ ကျော်ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း TASS သတင်းဌာနအရ သိရသည်။ (Xinhua)
MOSCOW, Jan. 23 (Xinhua) -- The Russian Foreign Ministry blamed the U.S. Embassy in Moscow for interference in opposition rallies in Russia, which are the country's domestic affairs.
The U.S. Embassy has shown disregard for diplomatic rules and regulations by actively posting messages on social media in support of unsanctioned protests in Russian cities, the ministry said inastatement.
"We are talking about encouraging violent actions, hypocritically declared as peaceful protests, in which the organizers cynically involved even minors," the statement read.
Attempts by U.S. diplomats to incite radical actions are doomed to failure and will have negative consequences for Moscow-Washington relations, it added.
The ministry made the remarks after activists staged unauthorized protests inanumber of Russian cities earlier in the day to show support for detained opposition leader Alexei Navalny.
About 4,000 people participated in the rally at Pushkin Square near the Kremlin, the Moscow branch of the Russian Interior Ministry said inapress release.
More than 600 protesters have been detained by police in downtown Moscow, according to TASS news agency.
(1)Supporters of detained Russian opposition leader Alexei Navalny clash with riot police officers during an unsanctioned rally in central Moscow on Jan. 23, 2021. (Xinhua/Evgeny Sinitsyn)
(2)Protesters hold posters in support of detained Russian opposition leader Alexei Navalny during an unsanctioned rally at Pushkin Square in central Moscow on Jan. 23, 2021. (Xinhua/Evgeny Sinitsyn)